Sida loo cabiro loona hagaajiyo Istaraatiijiyadda suuqgeynta ee Twitter | Martech Zone
Khamiis, May 4, 2017 Khamiis, May 4, 2017 Douglas Karr
Ma jiro war aad u tiro badan oo ku saabsan barta Twitter-ka welina wali kama maqal Jack oo ku saabsan aniga Warqad Furan oo ku socota Twitter. Taasi waxay tiri, wali waxaan adeegsadaa Twitter-ka maalin kasta, waxaan kahelayaa qiimaha sawaxanka dhagaha la ', waxaana rajeynayaa inay guuleysato. Miyaad isticmaali kartaa Twitter si aad uga caawiso kor u qaadista sumcaddaada gaarka ah, sumcadda shirkadaha, wax soo saarka, ama adeegyada? Dabcan!
Boqolkiiba konton iyo todobo isticmaale ayaa barteeda Twitter ka ku helay ganacsi cusub oo yar ama dhexdhexaad ah, dadkaas badhkoodna waxay raaceen oo ay ka dukaameysteen bakhaarka shirkadda ama degelkeeda. Intaas waxaa sii dheer, kuwa raacsan waxay awood xoog leh u yeelan karaan khadkaaga hoose: saddexdiiba shantii taageerayaal ayaa wax iibsatay iyadoo lagu saleynayo wax ay ku arkeen nafaqadooda, 43% ayaa qorsheynaya inay wax badan ka iibsadaan shirkadaha ay raacaan. SurePayroll
SurePayroll waxay soo saartay macluumaadkan - Tilmaamaha Fudud ee Falanqaynta Twitter-ka ee Isla Markiiba Loogu Hormariyo Ka Qaybqaadashadaada - tarjumidda tilmaamaha suuqgeynta iyo cabbiraadda Twitter-ka ee ku aaddan faahfaahintan faahfaahsan:
Muuqaal ahaan - iyada oo aan loo eegin waxa ku jira, kaliya lahaanshaha koontada calaamadeynta shirkadaha waxay hagaajineysaa aragtida astaan ​​macaamiisha.
Wicitaanka Waxqabadka - macaamiisha waxay u badan tahay inay tallaabo ka qaadaan macluumaadka ku jira Twitter-ka marka loo eego bogga, heshiiska bulshada, emaylka, ama boostada tooska ah.
Iibso - shan ka mid ah shantii qof ee raacsan waxay wax ka iibsadeen meherad yar ama mid dhexdhexaad ah oo ku saleysan wax ay ku arkeen Twitter.
tubta - heerka kaqeybgalka, koritaanka raacayaasha, iyo qasabadaha ayaa ah astaamaha ugu muhiimsan sida lagu sheegay Twitter.
Infographic-ka ayaa si faahfaahsan u sharaxaya warbixinno iyo dashboodyo fara badan oo laga heli karo Falanqaynta Twitter-ka, oo ay ku jiraan Waxqabadka Tweet iyo Aragtida Dhageysiga.
Booqo Boggaaga Twitter-ka
Sida Loo Kordhiyo Ka Qeybgalka Twitter
Ku dhaji barta waqtiga saxda ah adoo adeegsanaya aalado sida Followerwonk, Kaydka, amaHootsuite Xogtiisa iyo dib u dhigiddeeda.
Tweet garee saxda ah adoo adeegsanaya sawirro, fiidiyowyo, xigashooyin, tirakoob iyo ishtags si kor loogu qaado wadaagista.
Tweet garee wadada saxda ah adoo dhajinaya dhowr jeer maalintii, ku celcelinta tweets, adoo adeegsanaya sheekaysiga Twitter-ka, toos uga dhigaya dhacdooyinka, iyo u mahadnaqa kuwa la wadaaga waxyaabaha.
tijaabi leh ereyo kala duwan, qaabab, iyo qaadashada codbixinta.
Isticmaal qalab sida Followerwonk iyo Buzzsumo si loo helo loona raaco saamileyaasha.
Tags: bufferappbuzzsumoxikmadhootsuitedhacdooyinka tweet-ka tooska ahfarriimaha tooska ahTwittersheekaysiga twitterwaxyaabaha ku jira twitterkahawlgelinta twittersawirada twitterSuuqgeynta Twittercabirka twittercabirrada twitter-kawadaagida twitterwaqtiga twitterfiidiyowyada twitter-kagoorta la soo qoroyo
ClearVoice: Mawduuc Shaqo-socodsiinta Mawduuca ee Qorshaynta, Shaqaalaynta, Maareynta, iyo Daabacaadda
Waad ku mahadsantahay wadaagida fiidiyowgaan Doug, waxay igu hogaamisay inaan iska qoro Twitter maanta today ka dib markii aan booqday goobta ilaa 30 jeer sanadkii la soo dhaafay. Ma lihi macaamiil adeegsada Twitter-ka weli, laakiin waxaan is idhi laga yaabee inaan raadkooda u daayo. Waxaa laga yaabaa inaan la yimaado hab aan ugu adeegsado suuq geynta naqshadeynta websaydhka.
Ma jiraan macaamiil Patronpath ah oo isticmaalaya Twitter? Ama sahaminta?
Waxaan layaabay sida Twitter-ka uu u baxay. Markii hore waxaan moodayay inay tahay wax iska caadi ah, laakiin markaa waxaan bilaabay inaan arko inay qiimo leedahay. Milkiilaha balooggu waa dariiq weyn oo isku xidhka bulshada akhristayaasha adiga, waxaanan rajaynayaa inay ka ilaaliso inay soo laabtaan wax badan…
Oktoobar 17, 2008 at 11:38 PM
Waxaan u adeegsadaa Twitterfeed sidoo kale… mid kale oo runtii waxtar leh waa Tweet Later (www.tweetlater.com). Marka lagu daro helitaanka boggagaas blog-ka ah ee lagu riixay twitter-ka TwitterFeed, waxaad sidoo kale diri kartaa farriimo otomaatig ah, farriimo toos ah, iyo xitaa safaf dhaadheer si loo sii daayo taariikhaha mustaqbalka adoo adeegsanaya goor dambe Waa aalad weyn oo loogu talagalay ujeedooyinka suuq-geynta haddii aad ku tuurtid xiriiriye fariimo otomaatig ah.
Waxaan hayaa warbixin bilaash ah iyo fiidiyowyo la socda oo dhan oo ku saabsan suuqgeynta Twitter & ka helitaanka taraafikada twitter-ka si aad ugu aragto inay ciyaar wanaagsan la yihiin akhristayaashaada. Ii ogeysii haddii aad xiiseyneyso inaad ka hadasho twitter-ka xoogaa, waqti kasta, iyo sida kuugu habboon.
Waan fududahay inaan helo of